Wuhan Pixel Box Cinema Cinema - Umagazini Design
Cinema I- "Pixel" iyisakhi esiyisisekelo sezithombe, umqambi uhlola ubudlelwane bokunyakaza ne-pixel ukuze abe ingqikithi yalomklamo. "I-Pixel" isetshenziswa ezindaweni ezahlukahlukene ze-cinema. Ihhovisi lebhokisi elikhulu ihholo linezimvilopholi ezinkulu ezilugobile ezakhiwe izingcezu ezingaphezu kuka-6000 zamapaneli angenasici. Udonga lokubonisa lwesici luhlotshiswe ngenqwaba yemichilo eyisikwele ephuma odongeni wethula igama elihle le-cinema. Ngaphakathi kule cinema, wonke umuntu angajabulela umoya omuhle womhlaba wedijithali okhiqizwe ukuhlangana kwazo zonke izinto ze- “Pixel”.
Igama lephrojekthi : Wuhan Pixel Box Cinema, Igama labaklami : One Plus Partnership Limited, Igama leklayenti : Hubei Xiang Sheng & Insun Entertainment Co. Ltd..
Cinema One Plus Partnership Limited Wuhan Pixel Box Cinema